Amasayithi Wezinsizakusebenza Zesitoko Nemiphumela Yezinsiza
Lwesine, Disemba 24, 2020 NgoMgqibelo, Ephreli 10, 2021 Douglas Karr
I-B-roll, ama-stock footage, izindaba zezindaba, umculo, amavidiyo angemuva, ushintsho, amashadi, amashadi e-3D, amavidiyo e-3D, izifanekiso ze-infographic zevidiyo, imiphumela yomsindo, imiphumela yevidiyo, kanye nama-templates agcwele wevidiyo yakho elandelayo angathengwa ku-inthanethi. Njengoba ubheka ukwenza lula ukuthuthuka kwamavidiyo akho, lawa maphakheji angakusheshisa ukukhiqizwa kwamavidiyo wakho futhi enze amavidiyo akho abukeke enolwazi olungcono kakhulu ngesikhathi esincane.
Uma u-savvy wobuchwepheshe obuhle, ungaze ufise ukungena ungene ekuthengeni ezinye izithombe. Ezinye zezinto ezigqwayizayo, ngokwesibonelo, ziza nemiyalo emangazayo yokuthi ungahlela kanjani ividiyo, ungene esikhundleni sayo, ama-logo, ushintshe umbhalo, njll.
Nasi isibonelo esihle. Bheka lokhu Iphakethe le-Whiteboard elivela ku-Videohive - ungasebenzisa zonke izigcawu ezahlukahlukene ezenzelwe ukuhlanganisa ividiyo yakho echazayo!
Noma ungahle uthande ukukhipha ividiyo emnandi ku-After Effects ngohlelo lwakho olusha lwe-iPhone. Mane uthenge i- Ikhathalogi ye-iPhone evela ku-BlueFX futhi uhambe!
Kunezingosi ezimbalwa ongazisebenzisa ezizosesha izingosi ezingama-50 zamasheya kuyo yonke i-Intanethi. Hlola Izolokya.net.
Amasayithi Evidiyo Yesitoko
Nalu uhlu lwezinsizakusebenza ezinhle zokuthola amavidyo wevidiyo yamasheya angenawo amakhosi ephrojekthi yakho elandelayo. Isayithi engilisebenzisa kakhulu ngenxa yokuhlukahluka kwalo okubanzi nezindleko eziphansi yile Depositphotos. Uma usesha ngevidiyo emkhakheni wokusesha, imiphumela izoba yividiyo. Noma, ungakhetha ividiyo kokudonswa phansi kosesho lwabo.
123RF - Izithombe zesitoko se-HD namavidiyo
I-Adobe Stock - Yenza imibono yakho emihle iphile ngokuhamba phambili kwesitoko.
Ubudala Fotostock - amalungelo amavidyo kliphu wamahhala futhi aphethwe.
I-Alamy - Izithombe ezingaphezulu kwezigidi ezingama-55 zesitoko, amavekhtha namavidiyo
Clipcanvas.com - Imali yelayisense yesikhathi esisodwa, Ukusetshenziswa okungapheli, emhlabeni wonke, noma iyiphi imidiya, noma iyiphi ifomethi, ukulandwa okuningi
Ukunyakaza kweCorbis - okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu nokuhlela okuvuselelwa njalo
Depositphotos - Umxhasi we Martech Zone!
I-DigitalJuice - Imiphumela yevidiyo nokulanda amavidyo.
Qhafaza - Izithombe ze-HD zomxoxi wezindaba ezibukwayo wanamuhla
iStockphoto - Sesha isitoko sevidiyo
Ama-MotionElements - Izithombe ze-stock-Asia eziphefumulelwe kanye ne-animation
MovieTools - Izithombe zangemuva ezingama-animated ze-2D ne-3D, izithathu eziphansi nokuningi
Ama-Plixs - sesha izinkulungwane zezithombe zamahhala ezisezingeni eliphakeme namavidiyo aqoshwe ngelayisense ye-CC0.
Pond5 - esigcawini semidiya yemidiya
Ukuvuselela - okungabizi amasheya evidiyo, ngemuva kwemiphumela yemiphumela, umculo nemisindo
Ugogo - amavidiyo wesitoko angenamahhala
Amasheya esitokwe - imidwebo esezingeni eliphakeme yesitoko esinamalayisense angalawulwa mahhala namalungelo. Izithombe ze-Ultra HD ziyatholakala ukulanda ngo-1080p.
IndabaBlocks - Isisetshenziswa esususelwe ekubhaliseni sokulanda ama-stock footage, izizinda zokunyakaza, izifanekiso ze-After Effects nokuningi.
Ividiyo yevidiyo - Amafayili wamavidiyo wamahhala
Vimeo - Ividiyo yesitoko ekhethekile, engenabukhosi, ekhethwe abahleli beVimeo.
Amavidiyo we-YayImage - Ngaphezu kweziqeshana zevidiyo ezingama-250,000 HD nezingu-4K ezinentengo ephansi.
Futhi uma ungathanda imidwebo ethile yakudala, hlola ifayela le- Izinqolobane Zamabhayisikobho E-Inthanethi!
Qaphela: Sinezixhumanisi ezihambisanayo kulokhu okuthunyelwe!
Tags: 123RFadobei-adobe stockemva kwemiphumelaemva kwemiphumela yezifanekisoUbudala Fotostockalamynoma yiluphi uhlobonoma iyiphi imidiyai-b-rollI-BBC Motion GalleryokuluhlazaI-ClipcanvasUkunyakaza kweCorbisI-DigitalJuiceQhafazaImidwebousesho lwamavidiyoFramepoolamavidyo wesitoko wamahhalautholeiMovieIzinqolobane Zamabhayisikobho E-InthanethiistockphotoAmavidiyo Wokumakethaizizinda zokunyakazaizinto ezinyakazayoMovieToolsokulandwayo amaningiImali yelayisense yesikhathi esisodwaUkusetshenziswa okungapheliPond5Ukuvuselelaamalungeloabasebukhosini mahhalaUgogoisitokwe izithombeAmasheya esitokweividiyo yesitokoamavidyo wevidiyo yesitokoukuvimba izindabaizinguqukoAmabhulokhi wevidiyoimiphumela yevidiyoukubonwa kwevidiyoukuguquka kwamavidiyoIvidiyo yevidiyoisitoko se-vimeoibhodi elimhlopheEmhlabeni jikelele
Siyabonga ngokushiwo, uDouglas! Kwaziswa kakhulu.
Aug 18, 2014 ngo-11: 20 PM
Siyabonga ngokufaka ama-MotionElements alolu hlu oluphelele lwezindawo ezinkulu zemakethe ze-Stock Media.
Qiniseka ukuthi uvakashela bese uzama i-VisualSearch entsha futhi elula ukuthola okuqukethwe ngokushesha.